Fanakalozam-bola amin'ny varotra blur: pitch, find, execut | Martech Zone
Zoma, Aogositra 3, 2012 Alahady, Septambra 8, 2013 Douglas Karr
Na dia nampiroborobo ny orinasantsika aza ny varotra am-bava, dia tsara vintana tokoa izahay manana mpanjifa tsy mampino toa azy ireo izay mizaka ny fahombiazany. Etsy an-danin'izany, sahirana izahay amin'ny fitadiavana loharanon-karena azontsika ampiasaina tsindraindray amin'ny paikady manokana. Sarotra ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa iray hafa, saingy ny fahasarotan'izy ireo tsy hahomby, mamela antsika haka ireo entana ho an'ny mpanjifanay.
Blur Group dia namorona an fifanakalozana marketing amin'ny Internet mampifandray loharanon-karena sy orinasa. Amin'ny alàlan'ny sehatr'izy ireo, afaka mandefa fotoana mety ianao raha orinasa… na mamaly ary manararaotra raha toa ka mpanjifa ianao.
Tsy fifaninanana ity: fomba vaovao hitondrana ny orinasanao vaovao ary avelantsika hanatevin-daharana ireo manam-pahaizana izay manana traikefa voaporofo, tsy misy asa manokana: mitovy ny fomba ilazanao ny fotoana mety amin'ny raharaham-barotra vaovao.
Tiako ny programa toa an'ity, Elance, Volavola 99 ary serivisy hafa izay manome fotoana ahafahan'ny orinasa mahay sy mpiasa tsy miankina mahita. Tsy ny orinasa rehetra no manana teti-bola marketing na loharanon-karena hamoahana ny teny. Ny fifanakalozana an-tserasera toy izao dia mety ho izay ilainao ihany raha toa ianao ka karazana talenta toy izany.
Ny rafitra dia manana matihanina 20,000 XNUMX mahery miandry anao apetraho ny fohy ataonao!
Tags: nanjavozavo ny zavatra nosoratanyblur marketingcrowddsourcemahaleotenafifanakalozana marketingmarketing tsy miankinasehatra marketing